Madaxdhaqmeedku Waa Kee ????By :- Caqil Abdi Rahman Hasan Xaaji | Toggaherer's Blog
« XAALUFINTA DHAQAALE EE HARGEYSA WAA IN LOO ARKO MASIIBO QARAN.
jawaab hadalkii faysal , siiraanyo iyo riyaale 2003, 2009 maxaa iska badalay »
Madaxdhaqmeedku Waa Kee ????By :- Caqil Abdi Rahman Hasan Xaaji
Badhtamihii Sannadkii 2004 ayaa Idaacadda BBC da laanta Af Carabigu wareysi ay la yeelatay Prince Hassan Al Talal ka Urdun lagu weydiiyey, xurguf dhex martay Isaga iyo Boqor Cabdalla oo uu Adeer u yahay. Si Qurux iyo Sharaf Qoys ku dhisan ayuu Amiirku kaga jawaabay oo ahayd,, Anaa Ibn ul Malik, Wa Akhul Malik Wa Camul Malik,,. Waxan ku xasuustay Karamka iyo Sharafta uu huwiyey Boqortooyadoodii, waxanan barbar dhigayaa oo aan ku dhererinayaa in aynu leenahay Saldanado la ayni iyo Fac ah taa Reer Talaal.
Qoraalkan waxan ka feejignaan doonaa Qadaf , Meel ka dhac iyo Xad gudub iga gaadha Madaxdhaqmeedka Sharafta leh ee Somaliland. Ma ihi Qoraa, ma ihi Siyaasi, kamana lihi dano iyo ambitions kale oo gooni ah, Waxanse isku deyayaa in bardaan iyo miisaan aan saaro Raadkii soo jireenka ahaa ee Madax dhaqmeedka iyo ka Zamankan jooga.
Ereyga ,,Waxan u soo joogay,, waxan ku qadarinayaa qof kasta oo gu’ keliya iga weyn, waxan u soo joogay Dhirtaa waaweyn ee damasha ah iyo Dooxaa Hargeisa oo shirarka lagu qabsado oo dhammaan bulsho weyntu ay u goleysato kagana hadlaan Danahooda oo Madaxdhaqmeed kiina uu dhex fadhiyo, Ducana ugu fura, Ducana ugu Gudoomiya. Wuxu ahaa Raad soo jireen oo in badan la mahadiyey soo na dhawaadaay.
Xilligaa Madaxdhaqmeedku iyo Guurtidiisu ay dooyeysan jireen Damasha hoosteeda ayey Go’aanadooda, Shir Jaraa’id iyo ku TV toona may qaban jirine, Badhasaabkii Ingriisku isaga oo Daliil ah ayaa bartay fadhiyaan ugu iman jiray. Hore ayey u baxday,, Suldaanaw Ingiriisku.,, Kalsooni Madaxdhaqmeedku iyo Bulshadiisu ay qabeen ayey ahayd.
Taariikhdaa Milgaha iyo Haybadda lahayd intiina maanta Qormadan akhrisanaysaa Nin soo gaadhay iyo Nin Sheeko iyo Maqal ku qaatayba waa leedihiin, intaas baana igaga filan. Zamankaas aan ku faanay, waa Zamankaa Qiimahaeeda aan ku tiiriyey ee ay ka maqaam iyo Magac ba roonayd taa Ilma Talaal.
Madaxnimada Hoggaandhaqmeedku laba jeer ayuu liicay:
Labada jeer ee ay liicday, marka hore wuxu ahaa Xilligii Macanggaga ee Taliskii Siyaad Barre ee Yamyam iyo Qadaad Weyn, Guulwade iyo Dhagadhegeeye, waa Xilligii la waday Isir iyo Hayb tirtirka, waa Xilligii ay ula baxeen Isku sima, waa Taariikhdaa Madoobayd ee ina soo martay. Cadaadin iyo Cabudhintaa waa tii aakhirkiina lagaga dhiidhiyey oo ay ku jabeen ayey ahayd.
Markan labaad ee ay liicday way ka cawaaqib xun tahay markii hore waxanay dhammaan burburay Adeeggii hufanaa ee ay Shacabkeeda u qaban jirtay, waxa dhammaan halaabay Milgihii iyo Mudnaantay lahayd.
Wuxu noqday Madaxdhaqmeedkii:
* Maamul kolba Xukuumadda jirtaa iyo Inta Kursiga kula loolamaysaa ay si dadban u adeegsadaan oo Kooxibi badh goosato.
* Waxay Xukuumadihii kala danbeeyey ay ku dhiiradeen una suurtawday in kii hore u jiray (Suldaanka) ee ka hor yimidba in ay mid ka daba keenaan kaas oo sida badan aan ku iman Talo iyo Rabitaan Beeleed.
* Waxan xasuustaa Maalin keliya oo isla gelin keliya Magaalada Hargeysa Galbis iyo Gaadiid badan lagu soo geliyey laba Suldaan oo isku Beel ah oo midba Tuulo lagu soo caleemo saaray.
* Waxa dhacday kii soo kordhaaba in uu ka booday ama ka dhaqaaqay Taashkii iyo Karaamadii Dhaqanka ,kuna milmay Siyaasad.
* Taasina waa ta dhaxal siisay Madaxdhaqmeedkii inuu ka guuray Madashii uu Beesha dhex fadhiyey, waydinkaa arka ee maalin oo dhan ay hor tubanyiin Madaxtooyada iyo Xafiis Dawladeed ee Askarigu irrid ku hor joogo. Subaxii kolkad soo toostana aad maqlayso Suldaan Hebel ama Hebel hebel ayaa xalay TV Hebel ka hadlay oo ama wax canbaaraynaayey ama wax beeneynaayey!!!!
* Kolkii Madaxdhaqmeedkii u tafaqsaday dhanka Siyaasadda waxa isla Beesha u kala jabtay, Koox uu goostay iyo in Xaq ku taagan oo dacalka haysata Cumaamaddii Beesha ee ay eeganayeen.
* Waxa ayaan darro ah ninka Madaxdhaqmeedka ah ee carrigiisii iyo dadkiisii Caleemo saartay dhex jooga oo Gurigii iyo gaadhigiiba ay Body Guard u joogaan, Ma la is weydiiyey !!! Madaxdhaqmeedku miyaanu ahayn kii ku le’di jiray Nabadda goor wal uu joogaba, ma waanu ahayn kii maalinta daran ee Colaadda kii Cumaadda tuuri jiray ee labada Col la dhex qaadi jiray!!!
* Madaxdhaqmeedka maanta wa ka Beeshiisa kala Faliidha ee Waar Ka Daa yidhaahdana, aasa ee Xadhig iyo caga jugleyn ugu Ham iyo Digleeya ee aan la gaban ama aan ka xishoon in Maalinba uu meel, wax aan Talo iyo Tashi Beel ku iman ula baahi taga!!!
* Madax dhaqmeedka Maanta waa kuwaa midba mid ka daba hadlaayo ee Kamaradda isku dhigaaya iyaga oo midba ka kale wuxu yidhi burinaaya, kuna faanaaya,, Kii baan Dhulka la dhacay,,.
Madaxdhaqmeedku Geed iyo Madashiisa iyo Hoygiisa ayaa Xurmo iyo Maamus qof kastaaba ku booqan jiray, Mantana Idinku Sheega!!
Talo iyo Sixid:
Golaha Madaxdhaqmeedka ee maanta Dalka ka jira hal qodob oo keliya ayey Ixtiraamkoodii iyo Maqaamkii ay Bulshada ku lahaayeen ay dib ugu hantiyi karaan. Qodobkaas oo ah M/Dhaqmeedku Faraha ha kala baxaan Siyaasadda iyo Maamulkeeda. Xil ka weyn iyo Masuuliyad ka qara weyn oo Magac iyo Mudnaanba leh ayaa loo igmaday, kuna kooban in ay hantaan Adeegga Beelaha. Golaha M/Dhaqmeedka waxa xil ka saaran yahay Xulka Siyaasiga Beesha io sida ay ugu kala haboon yihiin, Khibrad, Aqoon iyo Malaf Wacni isaga oo la kaashanaaya Beesha Waxgaradkeeda. Taas ayaa Dal iyo Dadba anfacda.
Dardaaran Xukuumad iyo Shacabba:
Maalin dhaweyd 10/02 waxa magaalada Hargeisa lagu xidhay nin Qoraa ah oo la yidhaahdo Abdirazak Suudi Nuur, waxana la sii daayey kolku xidhnaa 10 Cisho. Waxana loo xidhay ( Laguma eedayn ) Qoraal uu qoray. Xadhigiisa ka hor Masuul Sare oo Maxkamadaha ka shaqeeya ayaa ugu hanjabay in uu xidhi doono, haddii uu joojin waayo Qoraaladiisa uu jaraaidka ku Qoraayo!!! Waxa kale oo Warbaahinta Dalka lagaga waramay in Xadhigiisa uu ka danbeeyey Nin W/Ku Xigeen ah oo ay isku Beel yihiin. Saddex Cisho ka hor ayaa oodda laga qaaday, kolkii sii deyntiisa ay gacan ka gaysteen Hayado Xuquuqal insaanka ah. Waxa halkaa ku cad in aanay jirin Fal Denbiyeed Qoraaga loo haystay iyo File Number Eedeyn oo jira. Waa xadhig uu Qoraagu u xidhnaa laba Masuul.
Xukuumadda Gaar ahaan Golaha Wasiirada mid waa Digniin , odhan maayo Fadhigii Wasiirada ee Isniintii ayaa qaraarsaday in Abdirazak Suudi loo xidho Qoraalo uu qoray. Waxase muran ma doon ah masuuliyad daraanta iyo cabsida badan ee ku beeran Wasiirada ee Mansab ilaalintoodu ay ku ridayso denbiyadan oo kale, sida iska xidho. Waxa Shacabka ka dahsooneyn Falalkan iyo Tacadigan had iyo jeer ay ku dalaabsadaan Golaha Xukuumaddu. Sharcigu danbiilaha wuu qabtaa, laakiin ii haya iyo sii daaya maalmo ka dib waa tii Siyaad Barre. Digniin,, Dadku Yaanu Gadoodin,,. Madaxda Xukuumaddu ha ka waantawdo Falalkaa soo noqnoqonaaya ee laguala kacaayo Muwaadiniinta.
Shacabka Somaliland Midh baan idhi:
Waxaynu nahay Ummad ku Abtirsatay Diintooda Macaan iyo Cibaadadooda, Shacab ku abtirsaday Midnimo iyo Jiritaan, Idinkuna Dalkiina iyo Nabadiisa u soo jeeda, Xumaanta iyo Wadaheedana ka Tukhaantukhiya. M/Dhaqmeedkana u Duceeya.
Allahayaw Arligeena Odayadiisu Kay u Taliyaan, Allahayaw Allahayaw uu Ahaado Aammiin
This entry was posted on February 26, 2009 at 4:02 pm and is filed under 1.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.